Wafdi ka socda dowladda Kenya oo ku soo wajahan Muqdisho - Home somali news leader
Home somali news leader
Said Deni and Ahmed Madobe fly out of Mogadishu
President Farmajo welcomes the introduction of parliamentary electoral law
Suicide bomber strikes in Baidoa town in Bay region
Foreign fishermen prosecuted in Galmudug
PSG reach Champions League semi-final after beating Bayern Munich
Benin’s Talon re-elected president with 86 percent of the vote
French wine growers affected by rare frost support for gloomy harvests
Biden calls on Putin to ease Ukraine’s tensions, the summit suggests
The UN chief of rights fears that Myanmar may be heading…
Home NEWS Wafdi ka socda dowladda Kenya oo ku soo wajahan Muqdisho
Wafdi ka socda dowladda Kenya oo ku soo wajahan Muqdisho
Waxaa saacadaha soo socda la filayaa in magaalada Muqdisho soo gaaraan wafdi ka socda dowladda Kenya, si loo bilaabo wada hadalka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan khilaafka diblomaasiyadeed.
Dowladda Kenya ayaa dooneysa in la xaliyo khilaafka, iyadoo haatan u muuqata inay soo dabacday, waxaana sidoo kale Ururka IGAD uu cadaadis ku saarayaa labada dal inay dib u soo celiyaan xiriirkooda.
Wafdi ka socda Urur Goboleedka IGAD ayaa shalay soo gaaray magaalada Muqdisho, waxaana ay la kulmeen Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Balal Cusmaan, wafdigan oo ahaa Guddi IGAD u xil saartay xaqiiq raadinta xaaladaha ka jira xuduuda Soomaaliya iyo Kenya ayaa kormeer ku tagay magaalada Mandhera.
Lama oga inta ay qaadan doonto xal u helida xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaase socda dadaalo xooggan oo Urur Goboleedka IGAD ugu jiro sidii loo soo afjari lahaa khilaafka diblomaasiyadeed ee labadan dal ee ka tirsan IGAD.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya, Maxamed C/risaaq Maxamuud oo ka mid ahaa wafdigii Madaxweyne Farmaajo ee Jabuuti uga qeyb galay shirkii u dambeeyey ee madaxda IGAD ayaa 21-kii December sheegay in IGAD ay cadaadis xoog leh ku saareyso Soomaaliya inay xaliso xiisadda kala dhaxeysa Kenya.
Previous articleXasan Sheekh “Dalkaan yaa Midnimadiisa khatar la gelin, Somaliland ayaa hadda naga maqan…”
Next articleUS House Democrats are preparing for accusations when Senate Republicans criticize Trump
Madaxweyna Farmaajo oo darajadii ciidanka ka qaaday Taliyihii hore ee Booliska gobolka Banaadir
Madasha Badbaado Qaran oo sheegay inay qaadayaan tallaabo ka dhan ah muddo kordhinta
Midowga Yurub oo hanjabaad toos ah u direy Dowlada Federalka